Kungcono yini ukuthi izingane zihambe zingafake zicathulo? | Bezzia
UMaria Jose Roldan | 30/04/2021 22:00 | Iseluleko omama
Bekulokhu kunezikhundla ezingqubuzanayo maqondana nokuthi kuhle yini ukuthi izingane zihambe zingenazicathulo noma zingcono ngezicathulo. Abazali abaningi bavimbela izingane zabo ukuba zingahambi zicathulweni ekhaya ngokwesaba ukuthi bazogcina sebengenwe umkhuhlane.
Le yinganekwane eyiqiniso ngoba amagciwane angena emzimbeni ngomgudu wokuphefumula. Ngokuphambene nalokho, ochwepheshe kule ndaba bayeluleka ukuthi ingane ingafaki zicathulo ekhaya ngoba ngale ndlela izinyawo zikhula kangcono kakhulu.
1 Ingabe izingane kufanele zigqoke izicathulo?
2 Ziyini izinzuzo zezingane zokuhamba zingafake zicathulo?
3 Nakekela uma ingane ihamba ingafakile zicathulo
Ingabe izingane kufanele zigqoke izicathulo?
Ochwepheshe beluleka ngokubeka izingane ezicathulweni ezinyangeni zokuqala ubudala. Uma kukhulunywa ngokuvikela izinyawo zengane yakho ekushiseni okuphansi noma kokushaqeka, vele ufake amasokisi. Khumbula ukuthi ukukhasa kungukhiye ekukhuleni okuhle kohlelo lwe-psychomotor yengane, yingakho kungafanele ukuthi bagqoke izicathulo ezinyaweni zabo.
Lapho ingane iqala ukuhamba, abazali kufanele bakhethe ukugqoka uhlobo lwezicathulo eziguquguqukayo futhi eziphefumula kahle. Kusukela eminyakeni engu-4 noma emihlanu, izicathulo ezisetshenzisiwe kumele ziqine futhi ziqine ukuvikela izinyawo zengane.
Ziyini izinzuzo zezingane zokuhamba zingafake zicathulo?
Ukuhamba ngaphandle kwezicathulo ngaphandle kwezicathulo kuzovumela ukwakheka okungcono kwe-arch yonyawo, ebavimbela ekuhluphekeni kulokho okwaziwa njengezinyawo eziyizicaba
Ngesikhathi sokuqala kwempilo, eyena umntwana uzoba nokuzwela okukhulu ezinyaweni kunasezandlenis. Ngokuhamba ungafake zicathulo, izinyawo zakho zikusiza ukuthi uhlole umhlaba okuzungezile. Ngaphezu kwalokho, ukuhamba ngezicathulo akuvumeli noma kunomthelela ekuthuthukisweni okungcono kwazo zonke izinzwa zomncane.
Lapho uhamba ungafake zicathulo, omncane uzozizwa izinhlobo ezahlukahlukene zokwakheka ezinyaweni zabo. Lokhu kuvumela ingane ukuthi ikhule imizwa ehlukahlukene ebizwa nge-kinesthetic, ezisiza ukwenza ngcono ukuma kwemisipha ehlukile nokuqinisa amalunga omzimba.
Nakekela uma ingane ihamba ingafakile zicathulo
Ukuthi kuyalulekwa yini ukuhamba ungafake zicathulo, Akusho ukuthi ingane kufanele ngaso sonke isikhathi ingenanhlobo yezicathulo. Endabeni yokuya echibini, kubalulekile ukuthi omncane agqoke ama-slippers, ngoba yindawo lapho kutholakala khona ukutheleleka okuhlukahlukene.
Uma kwenzeka ukuthi uhlobo oluthile lokulimala lungenziwa ngenkathi uhamba ngaphandle kwezicathulo, kubalulekile ukwazi ukuthi ukulimala kubangeleni. Ezimweni eziningi kuyadingeka ukuthola umuthi wokugomela ngqi ukuvimbela ukutheleleka ekubeni kubi futhi kubangele izinkinga ezinkulu nezibi.
Abazali kufanele bazi ngaso sonke isikhathi lapho omncane engahamba engafakile zicathulo nalapho kudingeka agqoke izicathulo. Awukwazi ukuvumela ingane ukuthi ihlale ingenazo izicathulo futhi ijwayele ukuhamba ingafakile zicathulo.
Ngamafuphi, Odokotela nochwepheshe bayeluleka ukuthi izingane zihambe zingafake zicathulo ngokuphelele isikhashana ngosuku. Iqiniso lokuzwa umhlabathi nokuhamba kuwo ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo lwezicathulo, liyabasiza ukuthi babe nentuthuko enkulu yohlelo lwabo lwe-psychomotor phakathi kwezinye izinzuzo.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » UMadres » Iseluleko omama » Kungcono yini ukuthi izingane zihambe zingafake zicathulo?
Imibono yokusebenzisa kabusha izimbiza zengilazi